Naturgy: seimwe nzira yekudyara mu2019 | Ehupfumi Zvemari
Naturgy: seimwe nzira yekudyara mu2019
Naturgy ndechimwe chekuchengetedzeka kuri kuita zvakanakisa mune yakasarudzika index yeSpanish equities. Zvese kusvika parizvino gore rino uye gore rapfuura, uye kusvika padanho rekuti ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dze shandisa zvirinani kuchengetedza. Hazvishamisi kuti ndeyedzimwe yezvikamu zvine mukurumbira pamusika wemasheya senge magetsi. Iko kudzoka kwakanaka kwazvo kuri kuwanikwa mumakambani ese akanyorwa panguva ino. Nemakambani akakodzera akanyorwa saIberdrola, Endesa kana Naturgy pachayo. Nemaonero akanaka kwazvo ekuti shanduko yayo ingave sei mumwedzi inotevera.
Nezve Naturgy, hazvifanirwe kukanganikwa kuti kambani inotungamirwa naFrancisco Reynés yakaratidza kuti, pasina kutora shanduko iyi yekuverenga, ingadai yakawana purofiti yakajairika yemamiriyoni e1.245 emamiriyoni. Sezvinei, 57% zvimwe Ndeapi madiki uye epakati masimari aifarira zvakanyanya nekuwedzera kwemutengo wavo. Kune rimwe divi, chikamu cheNaturgy chakawedzera makumi matatu kubva muzana gore rapfuura, kusvika ku30 euros pamugove. Kuva chimwe chezvikurudziro kusarudza ichi chikumbiro chemusika wemusika. Kuve mune portfolio yevakawanda vanoongorora zvemari.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti iyi kambani mune yesimba chikamu yakaratidzirwa neayo kushomeka kushoma, kana vachiisa mitengo yavo mumisika yemari. Iyo kashoma inopfuura ichiratidza kumuka kana kudonha pamusoro pe2%, izvo zvinoita kuti ive imwe yetsika dzakatsiga kwazvo dzemari dzenyika. Iine mutsara webhizinesi uyo zvakare wakagadzikana uye unoiita nzvimbo yekutizira kune vanochengetedza vanochengetedza mari mumapaki eSpain. Kunge vamwe vayo mubato, seEndesa kana Iberdrola pakati pezvimwe zvakakosha.
1 Naturgy: purofiti yako inokura
2 Kutarisana neshanduko yesimba
3 Kuvapo muBrazil
4 Hunhu hwekukosha uku
5 Investor kufarira
6 Iine mugove uri padyo ne6%
Naturgy: purofiti yako inokura
Naturgy yakabudirira kuvhara gore remari ra2018, iro rakaratidzirwa nekuuya kwesachigaro mutsva, kupinda kwevagovani vatsva, kuvandudzwa kwebhodhi revatungamiriri uye chimiro chitsva chesangano kune yakapusa, yakajeka gadziriro uye nehukuru kuzvimiririra kwebhizinesi. Gore iro simba renyika dzakawanda rakaunza kumusika nzira yekuenda ku2022 yekushandurwa kwayo, uye yakatanga chirongwa chirongwa chekuita kuzadzisa zvinangwa zvakagadzwa kuburikidza nembiru ina dzekugadzira kukosha.
Nekuda kweiri zano nyowani, kambani yatotanga kujekesa kukosha mune chirevo chayo chemari mwedzi mitanhatu chete mushure mekuburitsa Strategic Chirongwa 2018-2022, iine yakajairika EBITDA ye4.413 mamirioni euros, 12% inopfuura yegore rapfuura; uye yakajairika mambure purofiti yemamiriyoni e1.245 euros, 57% yakakwira kupfuura muna 2017.
Kutarisana neshanduko yesimba
Iye CEO wekambani, Francisco Reynés, akasimbisa kuti "isu takamisa mabhesheni ekutarisana nekushandurwa kweboka, kumisazve bhizinesi mukutarisana neshanduko yesimba uye kuzadzisa zvinangwa zvakagadzwa munzira itsva yemugwagwa. Mhedzisiro yegore remari ra2018 inoratidza shanduko yakanaka yemabhizimusi, asi zvichave mukati memakore mashoma anotevera apo tichaona kuvandudzwa kwakanyanya kwemhedzisiro apo isu tichifambira mberi mukuitwa kwechirongwa ".
Aida zvakare kuratidza "rakakosha basa rekurerutsa rakaitwa uye kutsunga kwekugadzira kukosha kwemugovani." Uye zvakare, akataura kuti "chibvumirano naSonatrach kana mari nyowani dzekugadziriswa muBrazil neAustralia mienzaniso yakatanhamara yekufambira mberi kwakanaka padanho repasi rose." Iri zano rehurongwa rakagamuchirwa kwazvo nevashambadziri uye semhedzisiro, kutenga kwakaiswa pachena pakutengesa. Pasi pe zvisina mhosva uptrend, sekune rimwe divi hunhu hwese hwesangano remagetsi hunoratidza, pasina kusarudzika chero mhando.
Chimwe chinhu chiri kupa kuenderana kune kukosha ndiko kuvapo kwakasimba mune dzimwe nzvimbo dzenyika dzese. Semuenzaniso, muBrazil uko zvido zvekambani yemagetsi zvakagadziridzwa uye inoita basa rakakosha kwazvo mumaaccount ayo ebhizinesi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Naturgy, kuburikidza Chizvarwa Chemagetsi Pasirese (GPG), yepasi rese magetsi emagetsi ekutsigira magetsi, yatanga kushambadzira mashandiro eGuimarânia magetsi ezuva, ari mudunhu reMinas Gerais.
Iyo kambani yakaisa mari inodarika mamirioni makumi mashanu emamiriyoni euros mukuvandudzwa kwenzvimbo mbiri idzi dzefotovoltaic dzinobvumidza kugadzirwa kwe95 GWh pagore. Iyi miriwo mitsva yakabatanidza kudyara kweanopfuura mamirioni makumi mashanu emamiriyoni euros munzvimbo yenzvimbo ye162 Ha uye vakaisa rekodhi nyowani munguva yekuurayiwa kwemapaneru ayo anodarika 95 akagadzirwa muBrazil (143%) neChina (250.000 %). Kuve yakakosha chikamu cheiyo mutsara wekambani mutsara.
Hunhu hwekukosha uku
Iyo yaimbove Gasi Natural parizvino ndeimwe yemasheya ane akanakisa matekiniki evose avo vanoumba iyo Ibex 35. Ichokwadi kuti panguva yekuwedzera kwemari inosara zvishoma kumashure munzvimbo dzayo. Ndichiri pane zvinopesana, uye ichi ndicho chinhu chakanyanya kukosha, mu nguva dzakawandisa yeSpanish equities, inoita zvirinani kupfuura mamwe akanyorwa. Sezvinoonekwa muzvikamu zvekupedzisira zvekutengesa. Iine vhoriyamu yekondirakiti, kune rumwe rutivi, yakakosha uye izvo zvinoratidza kufarira kune chikamu chevashambadzi vadiki nepakati.
Naturgy kukosha uko kunogona kutariswa se cap yepamusoro. Mune mamwe mazwi, pane kukosha kwakakosha kwekuchengetedzeka pakati pevatengesi mazuva ese. Chikamu chinouya kunyanya kubva kuzvinhu zvinonyanya kudzivirira kana zvinochengetedza zvemisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Kuva mumwe wevashambadziro vemusika wekutengesa wakakoshesa zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura, kutenderera manhamba maviri
Chero zvazvingaitika, pane chimwe chinhu chiri kuita zvakanaka kwazvo pamutengo wemagetsi. Ichokwadi icho icho chinokurudzirwa nevazhinji vevamiriri vemari vanofunga kuti iri muchinzvimbo chekutenga. Zvisinei nekuwongorora kwakasimba kwaakasangana nako mumakore maviri apfuura. Mupfungwa iyi, ivo vanofunga kuti ichine kukura kwakakura kugona. Zvirinani kusvika pfupi uye yepakati izwi uye pamusoro pezvimwe zvakakosha zvebhuruu machipisi muSpanish equities.
Mukati meichi chirevo chizere, ndeimwe yehunhu umo radar ichafanirwa kuiswa tora zvinzvimbo mumazuva anotevera. Kunyanya kana ichiperekedzwa nekuita kwakanaka mumisika yepasirese equity. Nekudaro, kana mafambiro asina kugadzikana akagadzirwa mukati mawo, hapana mubvunzo kuti iyi kukosha ndeimwe yevasina kubatwa zvakanyanya, sekutaura kwatamboita. Unogona kuve wakachengeteka munzvimbo dzako, kunyangwe pasina purofiti inogadzirwa nehunhu hwakanyanya hwekusarudzika index index yeSpanish stock stock.
Iine mugove uri padyo ne6%
Kune rimwe divi, imwe yemamwe maitirwo anofanirwa kupihwa nevashambadzi ndeyekuti inogadzira chikamu chinokwezva gore rega rega. Uine yegore negore uye yakavimbiswa kufarira padyo padyo ne6%, imwe yepamusoro-soro mumatunhu emunyika. Zvekuti nenzira iyi, vashoma nepakati varimi vanogona kugadzira portfolio yemari yakatarwa mukati meiyo kusiana. Zvisinei nekushanduka kwezvikamu zvako mumisika yemari. Kuenderana sesarudzo ine simba kwazvo kugadzira bhegi rekuchengetedza rakagadzikana kwemakore mashoma anotevera.
Zvese izvi, mune nharaunda umo zvigadzirwa zvebhangi zvinopa zvishoma purofiti semhedzisiro ye mutengo wakachipa wemari. Nemipendero yekumiririra isingapfuure iyo 0,50% chikumbaridzo, sezvazvinoitika panguva ino nemaakaundi ane mari zhinji, nguva dzinoiswa pamwe nehurongwa hwekuchengetedza. Chokwadi ichi chinokonzeresa vazhinji vesevha kuserekera kumaitiro akaita seichi chinopa kudzoka pamari inonyatso kunakidza kubva pane chero maonero. Kuburikidza nemari dzakasiyana siyana dzinoitwa gore rese.
Kune rimwe divi, kune chokwadi chekuti inomiririra mutsara webhizinesi wakadzikama uye unodzokororwa, senge magetsi. Senge panguva ino, vatengi vari kubhadhara mutengo unodhura kwazvo wemagetsi pamabhiri avo emhuri. Icho chinhu chiri kukanganisa mutengo wemasheya ekambani ino muchikamu chemagetsi. Kunyangwe iri mumakwikwi akasimba nemamwe makambani mune ino simba services bhizinesi mutsetse. Chero nzira, panguva ino zvinonakidza kuvhura zvinzvimbo pane kuzvivhara. Zvirinani mune izvo zvinoreva kune pfupi pfupi senge zano rekuita mari inobatsira pamwe nemikana yakakura yekubudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Naturgy: seimwe nzira yekudyara mu2019
5 inonakidza kwazvo misika yemasheya ekudyara mairi
Inguva yakanaka yekupinda Bankia?